B2C CRM waa mid Xasaasi u ah Macaamiisha Wajahaya Ganacsiyada | Martech Zone
Talaado, Agoosto 25, 2015 Talaado, Agoosto 25, 2015 David Trice
Macaamiisha suuqa maanta joogta ayaa ka awood badan sidii hore, iyagoo si firfircoon u raadinaya fursado ay kula falgalaan ganacsiyo iyo noocyo. Awoodda weyn ee loo wareejiyay macaamiisha si dhakhso leh ayey u dhacday waxayna shirkadaha intooda badan si xun u liidataa si ay uga faa'iidaystaan ​​dhammaan macluumaadka cusub ee macaamiisha ay ku bilaabeen siyaabo cusub.
In kasta oo ku dhowaad ganacsade kasta oo casri ah oo soo food saara ay u shaqeyso xalal CRM si loo maareeyo macaamiisha iyo rajooyinka, badankood waxay ku saleysan yihiin tiknoolajiyad tobannaan sano jir ah - waxaana loogu talagalay inay ugu horreyn la tacaalaan iibka B2B. Shirkadaha badankood waxay ku tiirsan yihiin diiwaanada macaamiisha kaladuwan ee ka dhexjira POS, eCommerce, ama Suuqgeynta suuqyada aan wadaagin xogta midba midka kale. Loo dhisay si loo taageero qaabkii hore ee ka koobnaa inta badan marxaladaha wax iibsiga, xalalkani ma awoodaan inay bixiyaan sawirro dhameystiran oo macaamiisha casriga ah markay soo galayaan kana baxayaan masraxa iibka marar badan, kanaallo kala duwan iyo goobo kala duwan oo taabasho ah ka hor intaan la beddelin.
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah in nidaamyada shaqeynaya iyo CRMs ee ku saleysan dabeecadihii hore aysan wax ku ool u aheyn maareynta macaamiisha casriga ah. Sirdoonka ay bixiyaan waxay ku kooban yihiin silo, oo laga soocay waxa laga barto dariiqyada kale iyo isdhexgalka; tani waxay ka horjoogsanaysaa inay isku darto xogta macaamiisha cusub waqtiga dhabta ah si ay u sawirto sawir sax ah safarka dukaameysiga cusub, oo isugu jira mid adag iyo mid aan toos ahayn.
Tani waa waxa igu kiciyay inaan abuuro ENGAGE.cx, nooc gabi ahaanba cusub oo CRM ah oo laga dhisay aasaaska si ay ugu suurtagasho ganacsiyada inay ogaadaan oo ay dhisaan xiriirada macaamiishooda. Wuxuu ku dhashay daruuraha, barxadani waxay baraneysaa dabeecadaha macaamiisha waxayna la wadaageysaa xogta dhammaan wadiiqooyinka, xitaa warbaahinta bulshada, iyadoo ujeedadu tahay gaarsiinta caqli macquul ah oo macquul ah oo macaamiisha ah meesha ugu muhiimsan: hal-hal-ku-dhigid u dhexeeya shaqaalaha iyo macaamiisha.
Waxaan ugu yeeraa B2C CRM.
Waa maxay sababta B2C CRM?
ENGAGE.cx, waan ognahay taas 80% faa'iidooyinkaaga waxaa geeya 20% macaamiishaada.
Qiyaas inaad kobciso xiriiro adag macaamiishan adoo u maareynaya cilaaqaadka aad ugu eg saaxiibtinimadaada; is garashada iyo isfahamka siyaabaha ugufiican ee loola xiriiro xaalada guud ee xaaladaha kaladuwan ee aad is dhexgal ku sameyneyso:
Wadahadal kasta oo aad la yeelatid asxaabtaada wuxuu ku saleysan yahay taariikh wadaag ah, waxaadna asal ahaan u taqaanaa sida loo tixgeliyo xaaladaha xaaladaha marka la hadlayo.
Markay soo wacayaan, qorayaan, tifaftirayaan, waad ogtahay cidda ay yihiin - qiimayaashooda, waxay doonayaan, iyo baahidooda.
Markay kuu soo diraan waxyaabo, had iyo jeer way khuseysaa maxaa yeelay way garanayaan qofka aad tahay.
Markay ka soo baxaan gurigaaga, waad ogtahay sida loo maaweeliyo, waxaadna u badan tahay inaad haysato cabitaankooda ay jecel yihiin.
Ku dabaqida wacyigalintaan meheraddaada, waxaad dooneysaa CRM-kaaga inuu yeesho awoodo uusan ku taageeri karin oo keliya noocaan cusub ee xiriirka macaamiisha laakiin inuu gacan ka geysto dhisidda kuwa cusub. Dhaqan ahaan CRM waa naafo maxaa yeelay aqoontiisu waxay ku egtahay oo keliya xaaladaha iyo waxqabadyada loogu talagalay inay wax ka qabato.
B2C CRM-kaaga cusub wuxuu fahmi doonaa sida macmiilkaagu isu badalo inta lagu guda jiro safarka wax iibsiga iyo Xiriirkeena Cloud® wuxuu u adeegaa inuu ku wargaliyo lana xoojiyo shaqaalaha leh caqliga macmiilka ee la xiriira, waxaa lagu dhisay barxad agile ah oo ka gudbeysa kanaallada si loo soo qabto loona xajiyo xogta dhaqanka.
Cusbooneysiinta B2C CRM: Aqoonta Safarka Macaamiisha
Cloud Our Xiriirka waxay bixisaa aragti, aragti iyo macnaha meesha ay macaamiishaadu ku jiraan safaradahooda gaarka ah. Tani waxay awood u siineysaa ganacsiyada inay bartaan siyaabaha ugu wanaagsan ee loola macaamilayo macaamiisha waqti kasta iyo goob kasta oo ku saabsan shuruudaha macaamiisha - dhammaan kanaallada, warbaahinta, iyo goobaha. Waqti ka dib, waxaan u dhiseynaa jadwal nololeed macaamiil walba taas oo iyaduna keenta heerar sirdoon oo aan horay loo arag oo lagu dabaqi karo macaamiisha shaqsiyadeed ama saadaalin ahaan u leh iibsadaha qofka.
Cusbooneysiinta B2C CRM: Awood siinta Shaqaalaha
Shaqaaluhu waxay kujiraan safka hore ee kaqeybgalka macaamiisha waxayna caadi ahaan yihiin kuwa ugu muhiimsan ee dhisida xiriirka iyo abuurista daacadnimo. CRM-yada dhaqameed awood uma laha inay ku xoojiyaan iyaga macluumaadka ay u baahan yihiin xilligan si loo wanaajiyo isdhexgalka macaamiil kasta. Daruuraha Xiriirka waxaa loo dhisay si gaar ah hareeraha iyadoo la siinayo shaqaalaha SAXDA ah ee la siinayo xogta macaamilka ee RELEVANT tallaabo kasta oo safarka ka mid ah. Ka fikir tixgelin nafsi ah oo ku saabsan macmiil kasta oo shaqaaluhu ka faa'iideysan karaan si ay u hagaan isdhexgalka.
Cusbooneysiinta B2C CRM: Agility Platform
Bixiyeyaasha dhaqameed ee CRM ayaa la bilaabay inay dib u soo ceshadaan wixii ay bixiyeen ee ku saabsan waayo-aragnimada macaamiisha, laakiin weli guud ahaan waxay ku dhisan yihiin laf-dhabarka B20B CRM ee 2-sano jirka ah ama waa isku-darka iibsiyo badan oo la isku tolay. Midkoodna xaaladdu ma abuureyso firfircoonaan ama jawaab celin loo baahan yahay si wax looga qabto dalabaadka macaamiisha maanta. Cloud Cloud Xiriirka wuxuu caqli galiyaa sirdoonka waqtiga dhabta ah wuxuuna ka caqli badan yahay goob kasta oo la taabto iyadoo la maareynayo lana falanqeynayo waqtiga dhabta ah dabeecadaha nolosha iyo dhacdooyinka nolosha.
Waxaa jira xalal badan oo CRM ah oo halkaa ka jira oo u tartamaya suuqa B2C, laakiin haddii moobiilku ujeedo loo dhisay si loo bixiyo xiriirka shakhsi ahaaneed ee macaamiisha miisaanka, ma isugu yeeri karaa B2C? Macaamiisha maanta ayaa gaajaysan in la fahmo; way damcaan wayna ka jawaabaan. Iyagoo ku hirgelinaya B2B CRM runta ah tiknoolajiyadooda, shirkaduhu waxay horumarin karaan cilaaqaadyo badan oo isbadal badan oo macaamiisha ah, taasina waa kala-duwanaanshaha tartanka iyo qayb ka mid ah guusha joogtada ah
Waxaad wax ka baran kartaa waxyaabaha aasaasiga ah ee B2C CRM iyo sida loo kobciyo khibrada macaamiisha adoo fiirinaya warqaddayada cad, Maxay tahay sababta Macaamiil Ganacsi ku wajahan uu ugu Baahan Yahay B2C CRM. Sababtoo ah waan ognahay aragtida inay rumaysan tahay, waxaad kaloo jadwal u samayn kartaa shakhsi demo halkan.
Tags: b2cCRMmaamulka xiriirka macaamiishaENGAGE.cx
David Trice waa wada-aasaha iyo agaasimaha guud ENGAGE.cx, waayo-aragnimada hogaamineysa CRM ee ganacsiga. Kahor intaan la furin ENGAGE.cx Trice wuxuu ahaa VP of CRM Oracle, halkaas oo uu hogaaminayay daahfurka Oracle's Fusion CRM.